तपाईंको प्रोटीन खुवाउनुहोस्! - कठिन समयमा प्रोटिनहरू मद्दत गर्नुहोस्
गिलहरीहरू बर्च ग्रोभ र नोभासिबिर्स्क चिडियाखानामा, सहर भित्र र यसभन्दा पछाडि हरियो कुनाहरूमा बसोबास गर्छन् (यस्तै अवस्था देशभरका अधिकांश वन पार्क क्षेत्रहरूको लागि सामान्य हो)।
कठोर पंजेहरू प्रयोग गरेर, तिनीहरू रूखहरू मार्फत यत्ति चाँडो हुन्छन् कि तपाईं तिनीहरूको ट्र्याक राख्न सक्नुहुन्न। र जम्पि, गर्दै, पुच्छरलाई "नियम" बनाउनुहोस्। धेरै मिटरको उचाइबाट खस्दा पनि, गिलहरी पनी प्यारासुटको जस्तो यसको शराबी पुच्छर प्रयोग गरेर सम्भवतः नुकसान नलगाउने छ।
र ती मानिसहरूलाई लामो समयको लागि बानी भयो, त्यसैले तिनीहरू आफैले तिनीहरूको हातबाट व्यवहार गर्दछन्। खुवाउने क्रममा, यी राम्री केटाहरूलाई हेर्नु विशेष उत्सुक हुन्छ। पाइन नटहरू र उनीहरूका साना खुट्टाहरूसहित, गिलहरीहरू वास्तवमै निपुण छन्, छिटो र विधिवत गरी, केवल गोलोहरूको थुप्रो मात्र रहन्छ।
तिनीहरूको राम्रो भोक छ, र तिनीहरूका दाँतहरू, कुनै कृन्तकहरू जस्ता, उनीहरूको जीवन भरि। तर जब रातो कपाल भएको जनावरले, न्यूक्लियोलीलाई हटाए, जसरी हत्केलामा घाइते अप क्लिकहरू छोडिन्छ, उनी आफ्नो सुरक्षा बिर्सिदिनन् र जम्पमा सधै तयार छिन्। जनावर सँधै सचेत रहन्छ, किनकि सुनुवाइ, यो बाहिर जान्छ, तिनीहरूमा सब भन्दा विकसित अर्थ हो। थप रूपमा, प्रोटीनहरू छन् भाइब्रेसे - कानहरु मा स्पर्श को एक अतिरिक्त अंग, forelegs मा, पेट र whiskers मा।
के गिलहरीहरू जाडोमा खान्छन्
तर भाँडामा पकाउँदा पनि, गिलहरीले चिसो मौसममा खाना बिर्सँदैन। उनको पुच्छर चलाउँदै, धेरै उफ्रँदै उनी आफैलाई एउटा क्यासको नजिक भेट्टाउँछिन्, जहाँ उनले जाडोको लागि आपूर्ति लुकाउँछिन्।
शरद theirतु उनीहरूको तातो समय हो, र त्यहाँ शंकुहरू, रूखहरूको बीउ, जराको बीचमा काष्ठफल, एकोर्नहरू, यदि ती पट्टि आउँछन् भने खाली ठाउँहरूमा स्टकहरू बाहेक धेरै सुनसान ठाउँहरू छन्। यो सत्य हो कि, सायद तपाईंले सायद हाँगामा च्याउ थाल्नुभएको देख्नुहुनेछैन, यद्यपि यो सायद ज the्गलमा हुन्छ।
वास्तवमा, भोकमरी मौसमलाई जित्नको लागि, एउटा गिलहरीलाई करीव3हजार पागल चाहिन्छ। त्यसोभए तपाइँ सार्नु पर्छ, यो कुनै कुराको लागी होईन कि तिनीहरू भन्छन् “चक्रमा एउटा गिलहरी जत्तिकै”। यस अथक हलचलको फुर्ती र फुर्तिले मात्र ईर्ष्या गर्न सकिन्छ।
यो सत्य हो, कडा परिश्रम गर्ने गिलहरी, जसले सबै शरद theतुमा खानाको हेरचाह गर्‍यो, अथक प्रयास गरे, चाँडै नै उसले आफ्नो "रहस्य" बिर्सन्छ र संयोगवश फेला पार्दछ, चिपमन्क्स र चूहोंको आपूर्ति प्रयोग गरेर, तिनीहरूलाई १.-मिटर बाक्लो तह अन्तर्गत फेला पार्दछ। हिउँ अन्य साना कृन्तकहरू र चराहरूले उनको बिर्सन प्रयोग गर्छन्।
गिलहरीहरू प्राय: अर्बोरियल हुन्छन्, तर हिमपातमा तिनीहरू अधिक समयको लागि खानाको खोजीमा भूमिमा खर्च गर्छन्, बिहान र साँझको ठूलो गतिविधि देखाउँछन्। जाडोमा, तपाईंले हिउँमा गिलहरीहरू फेला पार्नुहुन्न, तिनीहरू रूखहरूको मुकुटमा अधिक हाम फाल्ने गर्छन्, जो खतरा भएमा उनीहरूको लागि आश्रयको रूपमा काम गर्दछन्।
गम्भीर हिमपातमा जनावर केवल आफैंलाई खुवाउनको लागि मात्र आफ्नो शरणस्थानबाट बाहिर जान्छ वा सामान्यतया सुस्त अवस्थामा पर्दछ, लामो समयसम्म खाली खालीबाट बाहिर निस्केर जाडोको खराब मौसमको प्रतिक्षामा रहन्छ। कहिलेकाहीं चिसो मौसममा, गिलहरीहरू us--3 व्यक्तिको खोक्रोमा समूह हुन्छन्, सामान्य समयमा प्रत्येक आफ्नै लागि।
गिलहरीहरूमा मौलाउने मौसम
खैर, भेक्शा वा साधारण गिलहरीहरू (जुन ल्याटिन साइरुस वल्गारिसबाट आएको हो), दुई पटक पिघलाउँदैछ, र पुच्छिको वर्षमा एक पटक, साधारण वनवासी र रूसी जीवजन्तुमा गिलहरी जीनसको एक मात्र प्रतिनिधि हुन्।
यी प्यारा जीवहरूको छविहरू हेराल्ड्रीमा पनि छन्, तिनीहरू शहरको हतियारको कोटमा देख्न सकिन्छ, जेलिनोग्राड, याकुत्स्क, जर्मन एकर्नफर्ड र अन्यत्र।
कसरी प्रोटीन गुणा हुन्छ?
केही हप्ता पछि, गिलहरीहरू कपालदार हुन्छन्, एक महिना पछि उनीहरूले ज्योति देख्दछन् र खाली संसारको बारेमा सबै कुरा जान्न थाल्छन्। गिलहरी आमाले बच्चाहरूलाई हुर्काउँदछन्, "बुबाहरूले" सन्तानको भाग्यमा भाग लिदैनन्, उनीहरूको नजिक जाने प्रयास गर्दा उनीहरूलाई आमाले आक्रमण पनि गर्न सक्छ। जन्म पछि -8-१० हप्ता, युवा पुस्ताले आफ्नो स्वतन्त्र जीवन शुरू गर्दछ।
प्रोटिनहरू मद्दत गर्नुहोस्
महामारी र एक्लोसेन्सको साथ सम्बन्धित हालसालका घटनाहरूका कारण, जब बासिन्दाहरू घरमा बस्नुपर्‍यो, सहरी गिलहरीहरू लामो समयको लागि प्रकृतिसँग एक्लै थिए। खानाको अभावले सन्तानको पालनपोषण र जनसंख्यामा गिरावट आएको छ।
के प्रोटीन खान हुँदैन
तिनीहरूलाई सुरक्षित र खुवाउनुपर्दछ (बदामले मात्र होइन, किनकि त्यसमा भएका प्रोटीनहरू गिलहरी जीवहरूले अवशोषित गर्दैनन्!)। हामी हाम्रा साना भाइहरू बिर्सनु हुँदैन। र पार्कमा हिंड्न जाँदै, याद राख्नुहोस् कि गिलहरीहरू खुवाउँदैनन्, उनीहरूको लागि केहि चीज लिनुहोस्। आखिर, तिनीहरू पर्खिरहेका छन्।
कसरी एक गिलहरी जाडो को लागी तयार गर्छ?
कसरी कलियों बाट एक गिलहरी बनाउन? - शिल्प
गिलहरी र उडान गिलहरीहरूका बारे रोचक तथ्यहरू
बच्चाहरूको लागि प्रकृति बारे रोचक तथ्यहरू
के एउटा ब्याजर हाइबरनेट हुन्छ?
59 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 0,468 प्रश्नहरू।